Sekreteram-panjakana Amerikanina, John Kerry : “Tsy voasazy ireo mpitandro filaminana nanao ny tsy nety…” | NewsMada
Sekreteram-panjakana Amerikanina, John Kerry : “Tsy voasazy ireo mpitandro filaminana nanao ny tsy nety…”
Nivaivay ny fanakianan’ny departemantam-panjakana amerikanina, ny fitondrana momba ny tsy fanajana ny zon’olombelona eto amintsika araka ny tatitra ho an’ny taona 2015. Anisan’ny niharan’ny tsikera ny mpitandro filaminana.
Tsy afa-bela amin’ny tsikeran’ny Amerikanina toy ny tamin’ny fitondrana Tetezamita ihany ny fitondrana ankehitriny. Voatanisa ao anatin’ny tatitra ary anisan’ny tsy levon’ny vavonin’ny Amerikanina hatramin’izao ny momba ny fanondranana an-tsokosoko ny andramena. « Ny tsy fahombiazan’ny fitsarana, toy ny niampangana an’i Johanfrince Bekasy mpanondrana andramena an-tsokosoko nafahana avy tany am-ponja, ary nomena alàlana hivoaka ny firenena, na teo aza ny fandraràna azy tsy hahazo mivezivezy », hoy ny fanambarana avy amin’ny sekreteram-panjakana Amerikanina, John Kerry, ny 13 avrily teo. Eo koa ny tranga fampijaliana nataon’ny mpitandro filaminana, anisan’izany ny famonoana tsy ara-dalàna sy ny fitsaram-bahoaka; ny mpitarika fihetsiketsehana nokapohin’ny mpitandro filaminana. « Tsy nisy anefa ny sazy ho an’ireo nandray anjara tamin’izany », hoy ny fanambarana.
Nohitsin’izy ireo koa ny tsy fisian’ny fehezan-dalàna hiarovana ny mpanao gazety, ary hanafoana ny fanalam-baraka ho anisan’ny heloka bevava. « Anisan’ny olana mbola mitohy eo amin’ny zon’olombelona ny fandrahonana ny mpanao gazety, ny faneriterena ny fahalalahana miteny sy ny mivory », hoy ihany i John Kerry.
Ankoatra izany, notsipihin’ny fanambarana ny fanavakavahana eo amin’ny fiarahamonina sy ny herisetra mihatra amin’ny vehivavy; ny fanararaotana atao amin’ny ankizy sy fampanambadiana ankizy; ny fanondranana olona an-tsokosoko; ary ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Anisan’izany ny fanerena zaza tsy ampy taona hiasa.
Efa nahazo ny anjarany koa ny Tetezamita
Manoloana ireo, nanambara ny ambasadaoron’i Etazonia, Robert T. Yamate fa manohana ireo mpandray anjara ara-politika rehetra eto Madagasikara, miady mafy ny hanatsara ny tamberin’andraikitry ny governemanta, miaro ny fahalalahana ny zom-pirenena fototra toy ny zo hanao fihetsiketsehana am-pilaminana sy maneho hevitra tsy amin-tahotra ; ny fampidirana am-ponja, ary ho an’ireo miady amin’ny tsimatimanota mandika ireo fitsipika ireo. «Mampirisika ny governemanta sy ny olom-pirenena izahay, hiara-kiasa mba hanamafy orina ny demokrasia ary ny fanjakana tan-dalàna any amin’ireo faritra rehetra ary mba hahazoana antoka fa afaka misitraka ny tombontsoa ara-politika, ara-tsosialy sy ara-toekarena entin’ny firoboroboan’ny demokrasia, ny olon-drehetra eto Madagasikara“, hoy izy.
Tsiahivina fa nanaovan’ny Amerikanina tsikera maromaro momba ny tsy fanajana ny zon’olombelona ny fitondrana Tetezamita, nanomboka ny 2009. Vao mainka niharatsy kokoa anefa izany taty amin’ny fitondrana ara-dalàna.